November 2017 – Page2– CRM
Posted on November 19, 2017 Author swelsone	Comment(0)
The visiting US Congressional delegation led by Senator Jeffrey Alan Merkley has visited Cox’s Bazar and heard the “unspeakable” stories of Rohingyas who fled Myanmar’s Rakhine State to save their lives from continued persecutions. Senator Richard Durbin, Congresswoman Betty McCollum, Congresswoman Jan Schakowsky, Congressman David N Cicilline, US Ambassador to Bangladesh Marcia Bernicat and other […]
Posted on November 18, 2017 Author swelsone	Comment(0)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း အာဆီယံ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကနေ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံထဲကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မူစလင်ဒုက္ခသည်တွေ အရေး ဆွေးနွေး ပြောဆိုခဲ့ကြပေမဲ့လို့၊ ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက် မူကြမ်းထဲမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာအရေး ထည့်သွင်း ထုတ်ပြန်တာ မရှိပါဘူး။ ဒီအပေါ် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ Human Rights Watch က စိတ်ပျက်မိတဲ့အကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။ မခင်ဖြူထွေးက အပြည့်စုံ တင်ပြပေးပါမယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တော်မှာ ဒီသီတင်းပတ်ထဲ ကျင်းပတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း အာဆီယံ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲကနေထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေတဲ့ ကြေညာချက် မူကြမ်းထဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းကနေ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ သိန်းနဲ့ချီ အိမ်နီးချင်း […]
Posted on November 14, 2017 Author swelsone	Comment(0)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ကုလသမဂ္ဂ အကြီးအကဲဖြစ်သူနှင့် အမေရိကန်၏ ထိပ်တန်းသံတမန်တို့အား နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ တွေ့ဆုံခဲ့ချိန်တွင် နေရပ်စွန့်ခွာ ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်များ အကျပ်အတည်း ဖြေရှင်းရန် မြင့်မားနေသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖိအားများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့သည့် ထောင်ပေါင်း၊ ရာပေါင်းများစွာသော မူစလင်များကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ၎င်းတို့၏ နေအိမ်များသို့ ပြန်လာခွင့်ပေးသင့်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတားရက်စ်က ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာများ ပြုလုပ်ခွင့် ရရှိနိုင်မှု၊ အန္တရာယ်ကင်းပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ဆန္ဒအလျောက် ပြန်လာမှုများအပြင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုအကြား စစ်မှန်သည့် ရင်ကြားစေ့ရေးမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြောကြားခဲ့သည်ဟု တွေ့ဆုံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ မနီလာတွင်ကျင်းပသော အရှေ့အာရှထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ၏ […]
Posted on November 13, 2017 Author swelsone	Comment(0)
Shohel Mamun and Ashif Islam Shaon of Dhaka Tribune speaks with British Member of Parliament George Foulkes He discussed the upcoming Bangladesh general election in 2019 and the Rohingya crisis. Foulkes, Baron Foulkes of Cumnock PC isaBritish Labour Co-operative life peer. He has beenamember of the House of Commons, the Scottish Parliament and asalife peer […]
Posted on November 12, 2017 Author swelsone	Comment(0)